प्रकाश सपुतलाई पुण्यको सिधै फोन : जापान, जर्मन, चाइनामा जन्मिनु पर्ने किन भनेको ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 29, 2021 AdminLeaveaComment on प्रकाश सपुतलाई पुण्यको सिधै फोन : जापान, जर्मन, चाइनामा जन्मिनु पर्ने किन भनेको ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । केहि समय अगाडी बाट नेपालको युटुबको ट्रेण्डिङ्गको टपमा प्रकाश सपुतको मो पनि हैन र यो देश छ । उक्त गीतले चारैतिर अहिले तहल्का मच्चाइरहेको छ भने हरेक नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल पनि भैरहेको छ । जातकै कारण गायक प्रकाश सपुतले जीवनमा अनेक तीता–नमिठा भोगाइको सामना गरे।
मेला–महोत्सवतिर गीत गाउन जाँदा स्वर सुनेर सबैले हाइहाइ गर्थे तर जब साँझ पर्थ्यो र रात बिताउने कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि सबै तर्किन थाल्थे। साथीहरु ‘सुत्न त अलि नमिल्ला’ भनिहाल्थे। सानैबाट सिनेमाप्रति प्रकाशको विछट्टै प्रेम थियो । हिरो बन्न चाहन्थे । यस्ता सम्पूर्ण गीत समेटेको मेरो पनि हैन र यो देश दिन प्रति दिन आकाशमा उडिरहेको छ ।
धेरै राम्रा राम्रा कमेन्ट र उत्कृष्ट सलाह सुझाब छन् यस गीतमा तर पुण्य गौतमले यस गीतमा रहेका केहि शब्दले आफ्नो चित्त दुखेको बताउछन । बरु जन्म लिन पर्ने जापान, जर्मन, चाइना नेपालमा जन्म लिएर कहिले सुख पाइन भन्ने शब्दमा उनको आपति रहेको जनाए र अन्तरबार्तामै यसबारे प्रकाशलाई सिधै फोन गरेर सोधे । तपाइँ देशलाई माया गर्ने स्वाभिमानी नेपाली भएर यस्तो किन भनेको ।
पुरा भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस: